दलित भएकै कारण जन्मजात अपाङ्गले परिचयपत्र पाएनन् !:: Naya Nepal
दलित भएकै कारण जन्मजात अपाङ्गले परिचयपत्र पाएनन् !
दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकामा जन्मजात एक अपाङ्गले दलित भएकै कारण अपाङ्गता परिचयपत्र पाउनबाट बञ्चित भएका छन्। दक्षिणी दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका-१, सिम्टे पवटीका ३२ वर्षीय अम्बर कामीले दलित भएकै कारण अहिलेसम्म अपाङ्गता परिचयपत्र पाउनबाट बञ्चित भएका हु्न्। जन्मजात शारीरिक अशक्त भएको ३२ वर्षसम्म तत्कालीन महिला विकास कार्यालय र अहिले स्थानीय तह बेखबर छन्।
अम्बरका बुबा पदमबहादुर कामी ४ पटकसम्म परिचयपत्र र कानुनअनुसारको सहुलियतका लागि वडा कार्यालय पुगे तर छोराको अपाङ्गता परिचयपत्र पाएनन्। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन भन्दै संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्यो सोही संविधानअनुसार निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधि आए तर कामीले परिचयपत्र पाएनन्। स्वास्थ्य उपचारको हक त निक्कै परको कुरा जन्मजात शारीरिक अशक्त कामीले आफू अपाङ्ग रहेको प्रमाण समेत बोक्न बञ्चितिमा परे।
अम्बरकी आमा पदममाया पनि श्रीमानसँग छोरालाई परिचयपत्र बनाईदिन थुप्रै पटक वडा कार्यालयप पुगेको बताउँछिन्। जनप्रतिनिधिको त के कुरा कर्मचारीले समेत भोलि भन्न छोडेनन्। अम्बरका बुबाआमाले आफुहरु राजनीतिमा नलागेको र नेतासँग नजिक नभएकै कारण परिचयपत्र पाउनबाट बञ्चित भएको विश्वास गर्न बाध्य भएको आरोप लगाउँछन्। मेलुङ गाउँपालिका–१, पवटीका वडाध्यक्ष ईश्वर कोइरालाले गाउँपालिकालाई अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गर्ने अधिकार नदिएको कारण रोकिएको बताए। डाक्टर, प्रहरी, प्रशासनलगायत सम्मिलित बोर्डले निर्णय नगरेकै कारण ढिला भएको वडाध्यक्ष कोइरालाले बताए।
मेलुङ गाउँपालिका स्थापना भएदेखि नै हालसम्म कुनै पनि अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण नगरिएको मेलुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र विश्वकर्माले जानकारी दिए। उनले भने, ‘सबैतिरबाट कुरा उठेको छ, अब शिविर राखेर अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गरिनेछ।’ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीका कारण गाउँपालिकाका करिब ४ सय जनाले अपाङ्गताको सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको स्थानीयहरुको आरोप छ।
पर्वतमा बाढीले एउटा घर पुरियो, पूरै गाउँ जोखिममा
कुश्मा : निरन्तरको वर्षाका कारण बाढीले पर्वतको जलजला गाउँपालिका-८ फर्सेका ४५ घर-परिवार जोखिममा परेका छन्।बस्तीको बीचमा रहेको ठाडो खोल्सा (सात्खोसी) मा आएको बाढीका कारण एउटा घर पुरिएको छ। अन्य २५ घर पूर्ण रुपमा विस्थापित बनेको जलजला गाउँपालिका-८ का वडा अध्यक्ष हरिविकास जिसीले जानकारी दिए। बाढीले उक्त गाउँमा रहेका ४५ घरनै जोखिममा छन्।
उनका अनुसार खोल्सामा लेदो आउन थालेपछि मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएकाले मानवीय क्षति हुन पाएन। स्थानीय खड्कबहादुर केसीको घर बाढीले पुरिएको हो।
त्यसैगरी बाढीका कारण पर्वत, बागलुङ र म्याग्दी जोड्ने झोलुङ्गे पुल समेत जोखिममा परेको छ भने बेनी-मालढुंगा सडकसमेत बिहानदेखि अवरुद्ध छ।
बस्तीमाथिको ५० रोपनी भन्दा बढी जंगलनै धाँजा फाटेको अध्यक्ष जिसीले जानकारी दिए। ‘वर्षा नरोकिए ठूलो क्षति हुने सम्भावना छ’, उनले भने।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले ठूलो वर्षा भएकाले सम्भावित जोखिम हुन नदिन स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको बताएको छ। स्थानीयवासी नजिकैको विद्यालय वा आफन्तकोमा आश्रय लिएर बसेको प्रहरी निरीक्षक बुद्धिप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।
पहिरोले मध्पहाडी लोकमार्गको पर्वत-बागलुङ सडकखण्ड समेत गएरातिदेखि अवरुद्ध बनेको छ भने अझै संचालनमा आउन सकेको छैन।
बाढीका कारण जोखिममा परेको बस्ती।